Posted by admin on October 12 2013 16:26:24
HS:-Wasiirka qeyraadka dalka oo cuqaasha Hiiraan ka raali galiyey hadalo aysan mudneyn oo uu hawada u mariyey dhawr isbuuc ka hor iyo cuqaasha oo .....Wararka Maanta.
HS:-Wasiirka qeyraadka dalka oo ka mid ah golaha wasiirada xukumada r/wasaare Saacid kana soo jeeda Hiiraan ayaa dhawaan kulan dhex maray isaga iyo cuqaasha Hiiraan siweyn uga raali galiyey hadalo sida uu sheegay aysan muteysan maadaama uu siyaasada ku cusbaa waqtigaas.
Wasiir C/risaaq ayaa raali gelinta kedib odoyaasha amaba cuqaasha Hiiraan uga mahadceliyey sida hagar la,aanta ah ee ay habeen iyo maalin ugu taagan yahiin danaha bulshoweynta Hiiraan. sidoo kale wasiirka ayaa sheegay inuu aad u dareensan yahay xiligaan in aan talada looga maarmin cuqaasha uuna ka wasiir ahaan hada kedib uu aad u adkeyn doono xiriirka isaga iyo cuqaasha ka dhaxeeya.
Intaas kedib ayaa waxaa hadalka qaatay mid ka mid ah cuqaasha Hiiraan oo siweyn u soo dhaweeyey garashada iyo ixtiraamka noocaan ah oo ay markasta ka filayaan dhamaan inta siyaasada ku jirta iyo inta soo gali doonta ugu danbeyna waxaa leysla gartay in meel looga soo wada jeesto mushtaqbalka caruurta iyo dhulweynaha Hiiraan.
Wasiirka qeyraadka dalka oo ay dal iyo dibad u martay inuu aflagaadeeyey cuqaasha Hiiraan taasi oo xitaa aad u dhaawacday taageero badan oo uu ka heli lahaa qurbajoogta ayey tani u noqoneysaa mid ka mid ah guulaha siyaasadeed ee uu gaaray tan iyo markii xilkaan wasiirnimada uu qabtay.
Wasiir C/risaaq oo waxii ka danbeeyey markii uu cuqaasha Hiiraan hadalo aan qumaneyn u mariyey warbaahinta xili ay waliba ku saxsanaayeen waxa ay markaas dhaliilayeen ayaa waxii markaas ka danbeeyey waxuu ku jiray amaba Hiiraan ka heystay jahwareer siyaasadeed taasi oo aaqirkii danta ku qasabtay inuu nin ay qaraabo yahiin oo la dhashay madaxweynaha Soomaaliya laguna magacaabo Nuur Jalalaqsi ka codsado inuu madaxweynaha kala hadlo si uu u xajisto booskiisa.
Nuur Jalalaqsi oo ah shaqsi siweyn Hiiraan looga yaqaano marka laga soo tago dhalyada uu la dhashay madaxweynaha oo siweyn u dareensan in aan siyaasada Soomaaliya leysku haleyn karin oo xitaa hadii madaxweynaha dib u soo magacaabo wasiirka qeyraadka ayna micno badan ku fadhiyin maadaama hadii uu baarlamaanka xukumadaas la soo magacaabay ay labo mar diidaan uusan madaxweynaha waxbo u qaban karin, waxuu xooga saaray sidii uu cuqaasha Hiiraaan uga raali gelin lagaa waxiiba hadal ah ee xanaf leh ee wasiirka qeyraadka uga yimid.
Nuur Jalalaqsi oo ka mid ahaa qurbajoogtii ka qeybgashay shirkii Samadoon ee lagu soo gabo gabeeyey magaalada Belet Weyne ayaa ugu danbeyn cuqaasha Hiiraan intii aysan wasiirka isku arkin Mogdishu kala hadlay ugu danbeyna wasiirka iyo odoyaasha waxey arintooda ku soo aruurtay in ay maanta hal doon wada saaran yahiin kana mideysan yahiin waxkasta oo Hiiraan wax u dhimi kara in ay wada difaacaan, Soomaalida kale ee wanaag doonka ahne la soo dhaweeyo.
Marka la eego colaadii faraha badneyd ee ay shacabka Hiiraan soo mareen waxaad moodaa in ay hada isla jaanqaadeen siyaasiyiinta reer Hiiraan ugu jirta dowlada dhexe, masuuliyiinta maamulka iyo waliba qurbajoogta oo dhamaantood u dhega nugul talada odoyaasha, waxii ka danbeeyey shirkii Samadoon oo wax badan oo horey u qaldanaa lagu saxay wax badana ay dhiman yahiin una baahan yahiin dhameystir kaliya.
La soco wararkeena danbe iyo hadba xaaalda siyaasadeed iyo mid bulshoweynta Hiiraan oo meel fiican mareysa.